“Barcelona ma taqaano naxariis” – Gool FM
“Barcelona ma taqaano naxariis”
Dajiye January 31, 2019
(Spain) 31 Jan 2019. Laacibka kooxda Sevilla ee reer Portugal Daniel Carrico ayaa sheegay in kooxda Barcelona aysan aqoonin naxariis, kadib guuldaradii weyneed ay xalay kala soo laabteen garoonka Cump Nou, kulankii lugta labaad wareega 8-da ee tartanka Copa del Rey.
Kooxda reer Catalonia ee Barcelona ayaa 6-1 ku xasuuqday Sevilla kulankii lugta labaad ee wareega 8-da Copa del Rey, iyaga oo kaga gudbay wareega xiga ee tartankan.
30 jirka reer Portugal ayaa sheegay in ciyaartoyda reer Catalonia ay aad u firfircoonaayeen isla markaana aysan u naxariisanin kooxdiisa Sevilla, isagoo xaqiijiyay inay mudan yihiin in loogu hambalyeeyo u gudbitaankooda wareega xiga ee Copa del Rey”.
“Kooxda Barcelona aad ayay inooga gacan sareeyeen kulankan, gaar ahaan qeybta hore ee ciyaarta, waxaan qabaa inaan helnay fursado isku mid ah, laakiin ciyaartoyda Barca waxay ahaayeen kuwo wax ku ool ah, nooma naxariisanin”.
“Qeybtii labaad ee ciyaarta waan ku dhibtooday inaan dib ugu soo laabano, balse waxaan u baahneen inaan inbadan noqono kuwo mideysan”.
SAWIRRO: Newcastle United oo Lacagihii ugu badnaa Taariikhda ku soo iibsatay Miguel Almiron
Miyay Ilaaween Colaada wayn ee ka dhaxeysa kooxahooda Man United iyo Liverpool?....+SAWIRRO